निर्मलाका बुवा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना – Nagarik Today
निर्मलाका बुवा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना
November 25, 2018 by suchanapati
काठमाडौँ, ९ मंसिर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराजलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । कंचनपुर बाट शिक्षण अस्पताल ल्याइपुर्याउदा उनको खुट्टा समेत फ्याक्चर भएको छ । बाटोमा धेरै बर्बराउने र उफ्रिने गर्दा उनको खुट्टामा पनि समस्या भएको हो । एक्सरेको रिपोर्टमा पन्तको खुट्टा फ्याक्चर भएको देखिएको छ ।
उनलाई अस्पताल कै मानसिक वार्डमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको छ । बाटोमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले तीन जना सुरक्षाकर्मी समेत पठाएको थियो । केही दिनयता मानसिक स्थिति असामान्य देखिएपछि यज्ञराजलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो । छोरी निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गर्न दवाव दिन निर्मलाका आमा बुवा कञ्चनपुरमा धर्ना बसेका थिए ।
is albendazole available online.
धर्नाका क्रममा नै उनले असामान्य ब्यवहार देखाउन थालेका थिए । यज्ञराजलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको भए पनि कञ्चनपुरमा भने धर्ना यथावत छ । यज्ञराजलाई उपचारका लागि विमानबाट ल्याउने तयारी गरिएपनि विमान कम्पनीले यज्ञराजलाई ल्याउन नमानेपछि उनलाई गाडीमा ल्याइएको हो । महेन्द्रनगरबाट धनगढी ल्याउँदासम्म यज्ञराजले गाडीमा एकोहोरो बोल्ने छटपटाउने गरेका कारण समस्या भएपछि उनलाई लठ्याउने सुई लगाएर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
शिक्षण अस्पताल ल्याइएका यज्ञराजलाई आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उनको उपचारमा डा तीर्थमान श्रेष्ठ नेतृत्वको मेडिकल टिम खटिएको छ ।
Prevसर्वाधिक धन राशीको गायन प्रतियागिता ‘नेपाल लोक स्टार’ प्रतियोगिता हुने
Nextनिर्मलाका बुवा भेट्न नगद सहयोग सहित अस्पताल पुगे पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई